Museveni oo ka qeyb galaya shir madaxeedka IGAD ee Muqdisho ka dhacaya – STAR FM SOMALIA
Museveni oo ka qeyb galaya shir madaxeedka IGAD ee Muqdisho ka dhacaya
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ka mid ah Madaxda la filayo inay ka qeyb galeen shir madaxeedka 53aad ee Urur Goboleedka IGAD, kaasoo todobaadka soo socda ka dhacaya magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Madaxda kale ee la filayo inay Madaxweynaha Soomaaliya kala qeyb galaan shir madaxeedka IGAD ayaa waxaa ka mid ah Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, Salva Kiir Madaxweynaha Koofurta Sudan, Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalgne, Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Al-Bashiir iyo Ismaaciil Cumar Geelaha Jabuuti.
“Waa markii ugu horeysay oo Muqdisho ama Soomaaliya lagu qabto shir heer sare ah muddo 30 sano ah, waxaan aragnaa inay tani fariin taariikhi ah u direyso Caalamka oo ah in Soomaaliya ay dib u soo laabatay”sidaas waxaa yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Abdisalam Omer hadliye.
Hase ahaatee Hadliye ayaa soo daliishaday walaaca xaga ammaanka ee Kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo horay weeraro ka fuliyay Soomaaliya iyo meel ka baxsan, sida dalalka Kenya iyo Uganda.
Illaa 22,ooo ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda dalalka deriska ah ayaa ku sugan Soomaaliya, kuwaasoo taageeraya dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jirta Kooxda Al-Shabaab.
Maxkamadeynta Shan ruux oo loo haysto weerarkii Westgate oo Nairobi loo wareejiyay
Shirka Madasha Wadatashiga Qaran oo galay maalintii labaad